Global Voices teny Malagasy » Tian’ny Governemanta Hofehezina ny Fankahalana Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2017 4:23 GMT 1	 · Mpanoratra Marianne Diaz Hernandez Nandika (en) i Ruth Grant, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sary nataon'i Esther Vargas via Flickr (CC BY-SA 2.0)
Te-hifehy ny fiseraserana media sosialy amin'ny fanakombonam-bava izay lazaina ho “heloka bevavan'ny fankahalana” ny Antenimiera Nasionaly Fanorenana (ANC) — izay nandray ny fahefana andro vitsy lasa izay rehefa napetraka tamin'ny fomba manetriketrika tamin'ny 21 Aogositra –.
Tamin'ity herinandro ity ny ANC niady hevitra amin'ny volavolan-dalàna mitondra ny lohateny hoe “Ley de Convivencia Pacífica, contra la Intolerancia y la Violencia” [Lalànan'ny Fiaraha-Miaina Milamina, hiadiana amin'ny tsy fahazakana sy ny herisetra]. Hitan'ny ANC ho ao anatin'ny iraka ampanaovana azy hamokarana lalampanorenana vaovao ao anatin'ny roa taona, fotoana ametrahana ny fahefam-panjakana hafa rehetra ho eo ambany fiamboniany faratampony, ity volavolan-dalàna ity.
Tamin'ny Jolay 2017, raisin'ny  Antenimiera Nasionaly Fanorenana ho andraikiny ny fahefana fanaovan-dalàna rehetra izay teo ambany fahefan'ny Antenimieram-Pirenena Fanaovan-Dalàna, izay nananan'ny mpanohitra ny maro an'isa teo aloha, ka manafoana ho azy ny parlemanta sady manaisotra tanteraka ny governemanta venezoelana amin'io andrim-panjakana nofidim[-bahoaka] io. Efa nambaran'ny governemanta mialoha fa naniratsira  ny Antenimiera Mpanao Lalàna, ka efa raisiny ho tsy manankery avokoa izay hetsika na zavatra rehetra mety ho ataony.
Ny ANC dia natsangana tao anatin'ny onjam-panoherana izay nandravarava ny firenena tao anatin'ny volana maromaro, sy ny fisalasalana amin'ny maha-ara-dalàna ny ataony, ankoatra ny fidradradradrana fisian'ny hoso-pifidianana — izay ilay orinasa nanolotra ny teknolojia hanatanterahana ny fifidianana  ihany no nanao izany — ary ny tsy faneken'ny iraisampirenena ny maha-ara-dalàna azy.
Tsy zava-baovao, anefa, ny fanaratsian'ny fitondrana chavista ny media sosialy: tamin'ny taona 2010 dia efa nampangain'ny governemanta ho mandrisika fankahalana sy herisetra ny tambajotra antserasera, ary ahiana ho voasambotra  ireo mavitrika amin'ny fampiasana azy ireny. Tamin'ny taona 2014, efa nisy ny volavolan-dalàna napetraky ny antoko nitondra tamin'izany fotoana izany te-hametraka nyy fanohernaa an-tserasera ho “fampihorohoroana antserasera .”
Nanambara  Atoa Delcy Rodríguez, izay filohan'ny ANC fa :
Lasa sehatra fanaovan-bontolo sy setrasetra ho an'ireo te-hamely ny vahoaka ny media sosialy. Tsy maintsy atsahatra eto Venezoela ireny fanimbazimbana, fandrahonana ho faty, tenim-pankahalana ireny ary izany no ametrahana ao anatin'ity lalàna ity famaizana amin'ny heloka bevavan'ny fankahalàna sy ifehezana ny fampitam-baovao.
Ao anatin'ireo tsikefa maro hafa, notondroin'ny olom-pirenena ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ilay volavolan-dalàna, tsy hita an-tserasera ny rijan-teny. Na dia milaza aza ny mpanolotra fa hiadian-kevitra “miaraka amin'ny vahoaka” ilay lalàna, efa fanao ofisialy fa fombafomba fotsiny izany karazana adi-hevitra izany, fa efa atao any amin'ny vondrona voaomana mpanohana ny governemanta.
Tsy naseho ho hitantsika olom-pirenena hovakiana ny volavolan-dalàna iadiana amin'ny fankahalana: https://t.co/88txrxFF60 
Mampahatsiahy ireo fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana efa natao teo aloha, izay azo ampiana fifehezana ny media sosialy indray amin'izao fotoana, ny mpaneho hevitra sasany.
Manohy amin'ny fangejana ny fahafahana sivily i Maduro amin'ny alalan'ny fanakanana fantsom-baovao vahiny sy finiavana hanara-maso ny media sosialy. Miaritra ao anatin'ny jadona tanteraka i Venezoelà.
Ny tolo-dalàna ho an'ny ANC avy amin'ny filoha Nicolás Maduro tamin'ny andro indrindra nanaovany fianianana hankatoa ny “mihoa-dalàmpanorenana sy manana ny fahefana feno”, dia mitady ny hanafaizana “fankahalana” ao amin'ny media sosialy amin'ny fampidirana am-ponja hatramin'ny 25 taona. Amin'izao fotoana, amin'ity ANC manana ny fahefana feno ity, izay tsy ahitana afa-tsy ny solontenan'ny antoko mitondra, dia hita fa tsy misy na inona na inona afa-manakana ity lalàna ity tsy ho lany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/31/106305/
 raisin'ny: https://elpitazo.com/ultimas-noticias/eeuu-condena-toma-de-poderes-de-la-anc-por- encima-de-la-an/
 naniratsira: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/03/30/venezuela- maduro-disuelve-el-congreso-controlado-por-la-oposicion-por-su-desacato/
 hoso-pifidianana : http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40782203
 orinasa nanolotra ny teknolojia hanatanterahana ny fifidianana: https://elpais.com/internacional/2017/08/02/actualidad /1501678213_523507.html
 tamin'ny taona 2010 : https://advox.globalvoices.org/2010/09/20/venezuela-government-vs-social-networks-the-battle-continues/
 ahiana ho voasambotra: https://es.globalvoices.org/2015/10/06/venezuela-140-caracteres-que-llevan-a-la-carcel/
 fampihorohoroana antserasera: https://advox.globalvoices.org/2014/11/25/venezuela-draft-law-would-criminalize-online-protest-remove-checks-on-surveillance/